Naya Bikalpa | “सभापतिले पार्टीको विधान र आदर्शलाई आत्मसाथ गर्नुभएको भए आज देशमा कम्युनिष्टहरुको शासन हुने थिएन” - Naya Bikalpa “सभापतिले पार्टीको विधान र आदर्शलाई आत्मसाथ गर्नुभएको भए आज देशमा कम्युनिष्टहरुको शासन हुने थिएन” - Naya Bikalpa
“सभापतिले पार्टीको विधान र आदर्शलाई आत्मसाथ गर्नुभएको भए आज देशमा कम्युनिष्टहरुको शासन हुने थिएन”
प्रकाशित मिती: २०७५ भाद्र ११, ०९: ४३: १०
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहिबार पार्टीको विधान संशोधनका लागि मस्यौदा समिति गठन गरेका छन् । समिति गठनमा सभापतिले एकलौटी गरेको भन्ने आवाज एकातिरबाट उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ महासमिति बैठकको लागि पनि त्यतिकै दबाब केन्द्रीय समितिलाई छ ।
र कञ्चनपुरमा १३ वर्षिया निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनालाई लिएर अहिले कञ्चनपुर तनाबग्रस्त छ । घटनाका विषयमा नेकपा र सरकार दुवैले के कस्ता काम कारर्वाही गरिराखेको छ भन्ने विषयमा काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अशंः
चन्द्र भण्डारी– नेता, नेपाली काँग्रेस
पार्टीको विधान संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा समितिमा तपाईहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
पार्टी सभापति शेरबहादुरजीले घोषणा गर्नुभयो, यो राम्रो पक्ष हो । तर हेटौडामा सभापतिहरुको भेलाले जिल्ला सभापतिहरुलाई पनि सहभागिता गराउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको थियो । यसमा चाँही सम्बोधन भएन । यसको बारेमा केन्द्रिय समितिमा छलफल हुन्छ ।
तर सबै पक्षलाई मिलाएर बनाएको भन्नुभएको छ नि सभापतिले ?
उहाँले के भन्नुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन । उहाँले राम्रो काम गरेको भए नेपाली काँग्रेस यो हालतमा जानेनै थिएन । तर काँग्रेसलाई हाम्रो नयाँ पुस्ताले राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ । हामी त्यही अभियानमा छौं ।
सबै पक्षक सदस्यहरु सम्मिलित समिति बनेको भन्नुहुन्छ त सभापतिले ?
सबै पक्षका हुनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन, राम्रा मान्छे हुनुपर्छ । बिरालो रातो, कालो, टाटे–पाटे कस्ते छ भन्ने होइन, मुसा खान्छ की खादैन भन्ने सवाल हो । हरेक कुरामा विमती गर्दैैै झगडा गरेर हिँडने कुरा पनि भएन । एउटा सम्बन्धित ठाउँमा आफ्ना कुराहरु राख्ने हो ।
भदौभित्र महासमितिको बैठक हुन्छ त ?
महासमितिको बैठक नगर्ने भन्ने कुरै छैन । गर्नैपर्छ किनभने यो अहिलेको आवश्यकता हो । सभापतिले गर्न नसकेर त यस्तो अवस्था आएको हो नि । पार्टी सभापति तयार नहुने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । विधान नै मान्दिन, मैले केही पनि गर्दिन भने त त्यसका हरेक विकल्प हुन्छन् । संसारमा इश्वरको पनि इश्वर हुन्छ ।
विकल्प नहुने भन्ने त कुरा नै हुँदैन । शेरबहादुरजीले मान्नु भएन भने त्यसको कुनै विकल्प छैन भन्ने कहाँबाट हुन्छ ? शेरबहादुरजीले पार्टीको विधानलाई मान्नु भएन, पार्टीको विधानलाई यसरी नेक्लिेजेन्स गर्दै जानुभयो त र आज कम्युनिष्टबाट देश आक्रान्त छ । शेरबहादुरजीले पार्टीको विधान पनि नमान्ने, काम पनि नगर्ने, जनतालाई परेका राष्ट्रिय मुद्दापनि उठाउनुहुन्न भने जिल्लाबाट महासमिति सदस्यहरुबाछ हस्ताक्षर गरेर भएपनि विधानबाट हिँड्ने अवस्था हामीले गर्न सक्छौं । त्यसका लागि महासमिति आवश्यक छ । तर त्यसैको डरको कारण उहाँले महासमिति बोलाउन नखोज्नु भएको हो ।
तर तपाईहरुसँग त्यो गर्न सक्ने हिम्मत छ र ?
हामी हिम्मत नभएर बसेका मान्छे होइनौं । तपाईले हामीलाई न चिन्नु भएको छ न राम्रोसँग जान्नुभएको छ । हामी राजाको विरुद्धमा ५÷६ वर्ष जेल बसेर आएका, कपाल फुलाएर लागेका मान्छे हौ राजनीतिमा । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र पार्टीभन्दा अरु हामीलाई कुनैपनि स्वार्थ हौ । अहिले पनि हामी दुःखले बसेका छौं । दुःखले हिँडेका छौं । यो देशका निम्ति त्यसकारण हामीले राष्ट्रका निम्ति, पार्टीका निम्ति र प्रजातन्त्रका निम्ति जेपनि गर्छौ । हिम्मत नभएका हामी होइनौं ।
तपाईले राष्ट्र, पार्टी र प्रजातन्त्रको लागि जे पनि गर्छु भनिरहँदा आजको दिनमा काँग्रेस लथालिङ्ग र कमजोर भएको छ नि त ?
काँग्रेस पार्टी कहिल्यै कमजोर छैन । शेरबहादुरजी र उहाँका मान्छेहरुले टिकट वितरण गर्दा प्रदेश, केन्द्र र समानुपातिकलाई एउटै ठाउँमा राखेर समान रुपले दिएको भए यो अवस्था आउने थिएन । यो कम्युनिष्टहरुको यत्रो चुरीफरी हन्थेन । कम्युनिष्ट ल्याउने काम देउवा एण्ड कम्पनीको प्रवृत्तिले गरेको हो । यसमा कुनै दुइमत छैन । तर यो काँग्रेसलाई हामी नयाँ पुस्ताले करेक्सन गर्दै नयाँ विचारका साथ अघि बढाउँछौं ।
नयाँ नेतृत्वको लागि को छ नेता बन्न सक्ने काँग्रेसमा ?
को व्यक्ति आउँछ, अहिले भन्दै जाने कुरा होइन । वी.पी कोइराला, सुवर्ण शमसेर, गणेशमानजी किसुनजी र गिरिजजी उहाँहरुको आदर्श, दृष्टिकोण र उहाँहरुले गरेका कामाकुराहरुलाई हामीले अनुशरण गर्दै काँग्रेस, समाज र राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसैले पार्टीको नेतृत्व कसले गर्दा भन्नुभन्दा पनि अबका दिनमा कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।
काँग्रेसमा युवा पुस्ताले नेतृत्व लिने पालो कहिले त ?
गिरिजाप्रसादजी पछि सुशील कोइराला आउनुभयो । पहिलो संविधानसभाबाट झलनाथजी, प्रचण्डजी, बाबुरामजी, माधव नेपालजीहरुले संविधान बनाउन सक्नुभएन । दोस्रो संविधान सभाबाट सुशील कोइरालाजी आउनुभयो ।
हामीलाई एउटा निशान छोड्नु भयो र नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्नुभयो । आज पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीले समेत सुशील कोइरालाजीको जीवनशैलीको प्रसंशा गर्नुभयो । उहाँ मेरो अग्रणी हो । उहाँको दृष्टिकोणलाई मैले फलो गर्छु भनेर पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री इम्रान खानले भन्नुभयो ।
पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीले त गर्नुभयो तर काँग्रेसकै नेताहरुले गरेका छैनन् नि ?
नेताहरुले विलासी जीवन बिताउन त यो विकृति आएको छ नेपालमा । त्यही भएर त देश बनाउने लक्ष्य कसैको भएन, कसैको अर्जुनदृष्टि भएन । सबै नेताहरु भ्रष्ट भए । यिनिहरुले देश बनाएनन् भनेर त यो कुरा आइरहेको छ ।
विश्वका कम्युनिष्टहरु जनताबाट आएका होइनन् । यि माक्र्सवादी होइनन् । यिनिहरुलाई जनता चाँहिदैन तर नेपालका कम्युनिष्टहरु जनताबाट आएका हुन् । के.पी ओली नेताभएको कारण परिवर्तनको आशा जनताले गरेका थिए । त्यो अब रहेन । त्यसको मतलब शेरबहादुरजीले राम्रो गरे भन्ने होइन । देश बनाउने लक्ष्य कसैको भएन ।
२०७५ भाद्र ११, ०९: ४३: १०